खोप कार्ड कहाँ-कहाँ अनिवार्य, हराए के गर्ने र लिन कहाँ जाने ? – List Khabar
Home / समाचार / खोप कार्ड कहाँ-कहाँ अनिवार्य, हराए के गर्ने र लिन कहाँ जाने ?
खोप कार्ड कहाँ-कहाँ अनिवार्य, हराए के गर्ने र लिन कहाँ जाने ?
admin January 19, 2022 समाचार Leaveacomment 166 Views
काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरू, सार्वजनिक स्थल र भिडभाड हुने ठाउँमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लगाएको प्रणाण देखाउन खोप कार्ड अनिवार्य गरिएसँगै त्यसबारे धेरैमा चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्ड सुरक्षित राख्न र विद्युतीय कार्डका लागि दर्ता गराएर खोप लगाएको प्रमाण सधैँका निम्ति सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका भनाइमा खोपको अतिरिक्त मात्रा लिन पनि त्यस्तो कार्डको आवश्यकता पर्नेछ।
भिडभाड बढी हुने रेस्टुराँ, सिनेमाहल, रङ्गशालाजस्ता स्थानमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले निर्देशन दिइसकेका छन्। अब सरकारी कार्यालयसहित होटल, रेस्टुराँ, हल, रङ्गशाला, पार्क लगायतमा प्रवेशका लागि माघ ७ गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य हुनेछ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूले खोप लिएकै स्थानबाट कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अन्यत्रबाट कार्ड लिन खोज्दा यकिन विवरण नहुने भएकाले आफूले खोप लगाएकै स्थानमा जान दाहाल आग्रह गर्छन्।
“खोप लगाइसकेका व्यक्तिले कार्ड बनाउन चाहन्छन् भन्ने खोप लिएकै स्थानमा जाँदा कार्ड बनिहाल्छ। जान चाहिँ त्यही स्थानमा जानुपर्‍यो किनकि विवरण त त्यहीँ छ।” उनले कार्ड हराउने व्यक्तिका हकमा पनि सोही नियम लागु हुने जानकारी दिए।
Previous आज बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
Next आजबाट बदलियो यी ४ राशिको भाग्य : मिल्नेछ शत्रुबाट छुटकारा, प्रशस्त धन लाभ